သနပ်ခါးမေ: April 2012
ဂျဲဂျူးရေ ကိုယ်လာပြီ - Teddy Bear Museum & Camellia Hill
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:34 AM ကိုရီးယား
မြန်မြန်လေး သွားလိုက်ပါမယ်နော်။ ^^
နောက်တစ်နေရာက Teddy Bear ပြတိုက်ပါ။ အဲဒီရောက်ရင် သွားမယ်လို့ကို အားခဲထားတာ။ ပါလာတဲ့ တရုတ်က ကလေးကလားဆိုတော့ မဝင်ပါဘူး။ သူ့ဘာသာသူ ကားပေါ်မှာစောင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ဝင်ကြေးပေးပြီးမှတော့ တန်အောင်ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့တယ်။ :D
ဇာတ်ဝန်ခန်းလေးတွေ၊ အထင်ကရ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကောင် တွေ၊ နာမည်ကြီး ပန်းချီကားတွေကို teddy bear လေးတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ပေးထားပါတယ်။
Charlie Chaplin ဇာတ်ဝင်ခန်း
ကွန်ဖြူးရှပ်၊ ဂန္ဒီ နဲ့ ဂျန်ဂစ်စ်ခန်
^^တန်ဖိုးကြီး 125 karat Teddy^^
Swarovski crystals တွေနဲ့ ဆင်ယင်ထားတဲ့ Teddy
ပြတိုက်အပြင်ဘက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာလေးတွေလည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ရိုက်ထားတာတော့ အများကြီးပါပဲ။ တချို့ပုံတွေက မှန်ပုံးထဲကို ရိုက်ရတော့ အလင်းပြန်တာရယ်၊ ပြချင်တာလေးတွေ အများကြီးကျန်သေးတာကြောင့်ရယ် ခြိုးခြံ လိုက်ပါတယ်။ :D
နောက်ထပ် ခြေဦးဆန့်လိုက်တာကတော့ Camellia ပျိုးခင်း တောင်ကုန်း ပါ။ ကိုယ်လည်း စာအုပ်ထဲမှာ ပြထားတာတွေ့တော့ တရုတ်ကိုပြ၊ တရုတ်ကလည်း သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ သွားကြပါတယ်။
အဝင်ဝဆိုင်းဘုတ် မှာ မြင်တွေ့ရမယ့် ပန်းတွေကို အခုလို ပြထားပါတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ တကယ်တမ်း ပြထားတဲ့ camellia ပန်းတွေ မိုးရွာလို့ ကြွေ ကုန်တာနဲ့ ဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ တွေ့သမျှ ပန်းလေးတွေကို ရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ်။
ပန်းခြံတစ်ခုလုံးသာပတ်လိုက်တယ်။ ဘာမှလည်း သိပ်မတွေ့၊ တရုတ်ကလည်း ဗိုက်ဆာလို့။ မနက်က ပေါင်မုန့်ဝယ်စားတာ သူက မကြိုက်လို့ဆိုပြီး မစားဘူး၊ အခုတော့ ဆာပြီ။ ကားမောင်းသမားက သာမန်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားပေးပါတယ်။ ကျွန်းဆိုတော့ seafood ပေါမှပေါ။
မြတ်ကြည်က bibimbap ပဲစားမယ်လို့မှာ တော့ တရုတ်က မျက်နှာငယ်လေးနဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကြိုက်တာမှာ၊ စားမယ် လို့ဆိုမှ ဝမ်းသာအားရ သူကြိုက်တာမှာပါတယ်။ မြတ်ကြည်လည်း မသိဘူး။ လာချပြီး တည်မှ။ အားလားလား... အကုန်လုံးကို ကိုယ့်အရှေ့မှာ ပြုတ်ပစ်တာ။ ကြည့်ရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး။ တရုတ်ကတော့ ဖြီးနေတာပဲ။ ဘယ်ကတည်း က စားချင်နေတယ် မသိဘူး။
ကောင်းသလားဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့်စရာ မလိုပဲ ချိုနေတာပဲ။ တန်လည်းတန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငရဲကြီးတာပေါ့။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီမှာခဏ ဖြတ်ထားလိုက်ပါဦးမယ်။
အရှေ့ပို့စ်: ဂျဲဂျူးရေ ကိုယ်လာပြီ
နောက်ပို့စ် (ဇာတ်သိမ်း)... Chocolate museum, Cheonjeyeon ရေတံခွန်
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:43 AM ကိုရီးယား
ဂျဲဂျူးဆိုတာ The new7wonders of the world ထဲက တစ်ခုမှာပါဝင်ပါတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ အပန်းဖြေကျွန်း တစ်ခုပါ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့မတူပဲ၊ စိုပြေ နွေးထွေးတဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ မီးတောင်သေရှိရာ ကျွန်းလေးပေါ့။
ဌာနက ခေါ်တော့ တော်တော် ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ဘာလို့ဆို လေယာဉ်ခ၊ ဟိုတယ်ခ၊ ကားခနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာဆိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး နော? သွားတာက ၂ညအိပ် ၃ရက်ခရီး။ ပထမရက်ကတော့ conference.. ရောက်တာနဲ့ အဲဒီတန်းသွားလိုက်တာ၊ ၆နာရီ ညနေစာစားမှပဲ ပြီးပါတော့တယ်။
National Breast Conference 2013
နောက်ရက်ကတော့ ကိုယ်ရယ်၊ တရုတ်ပြည်က တစ်ယောက်ရယ်၊ ကားငှါးခ တစ်ယောက် တဝက်စိုက်ပြီး လျှောက်လည်လိုက်တယ်။ ပထမဆုံး ရောက်ဖြစ်တာက ကမ်းခြေဘက်မှာရှိတဲ့ Oedolgae (외돌개개) : the lonely rock ပါ။
the lonely rock: အဝေးမှာ ခပ်ပြားပြားတွေ့ရတဲ့ ကျောက်ဆောင်
ဟိုးအရင်တခါက ကိုရီးယားကို မွန်ဂိုတွေ နယ်ချဲ့တော့၊ ဒီကျောက်တုံးကြီးကို အဝေးကနေကြည့်ရင် စစ်တပ်တွေ အစောင့်ချထားတဲ့ အလား ဖန်တီးထားတာမို့ မွန်ဂိုတွေ လန့်ဖျန့်ပြီး အဲဒီကျောက်တုံးနားကို မကပ်ရဲပဲ ပြန်ခွါသွားရပါတယ်။
အများကြိုက်တဲ့ ချန်ဂင် ဒီမှာ ရိုက်ပါတယ် :)
Daepo Jusangjeolli မှာတော့ သဘာဝရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လေးထောင့်တုံးများစွာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေ ကမ်းခြေတလျှောက်မှာ အစီအရီ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
အနားမှာ လမ်းလျှောက်စရာ ဥယျာဉ် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
လာဖတ်တဲ့ ကိုကိုတွေအတွက် :P
ဇာတ်လမ်းရှည်နေလို့ ကိုရီးယားကားလို အပိုင်းလိုက် ခွဲလိုက်ပါတယ်။ :D
Teddy Bear ပြတိုက်၊ အကုသိုလ် ဝယ်ယူပုံ နဲ့ Camellia တောင်ကုန်း
Chocolate museum ချောန်ဂျီရောန် ရေတံခွန်
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:08 AM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
ဒီတစ်ပတ်တော့ ရွှန်းစိုလှပတဲ့ မျက်ဝန်းရဖို့ အလွယ်တကူ ခြယ်သနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို စာဖတ်သူများအတွက် ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ပုံစံက မသိရင်အချိန်တော်တော်ယူပြီး ခြယ်သထားတဲ့ အသွင်ဖြစ်နေပေမယ့် လုပ်ရတာ လုံးဝ မခက်ခဲပါဘူး။
ဟိုရက်က မွှေနောက်ရင်း ရှာတွေ့ထားတဲ့ ကိုရီးယား မိတ်ကပ်ပညာရှင် ဂျန်ဂ်ဆဲမူးလ် ရဲ့ နည်းလေးပါ။
လိုအပ်တာက eye shadow ရယ်၊ lipgloss ရယ်ပါပဲ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပမာဏလောက်ဆို မျက်လုံးနှစ်ဘက်လုံးအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
လက်မှာ lipgloss ကိုတို့၊ shadow နဲ့ ရောပြီး cotton tip (ဂွမ်းနားကျပ်တံ) နဲ့ မျက်လုံးကို ခြယ်တာပါ။
စီးကပ်ကပ် မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ lipgloss ကို နည်းနည်းပဲသုံးရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ လှလည်းလှတယ်။
မူရင်း tutorial video က ဒီမှာ ရှိပါတယ်နော်။
သူ့ရဲ့ ပင်မ site ကတော့ http://www.jungsaemmool.com/ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားဆန်ဆန် သဘာဝကျကျ မိတ်ကပ်လေးတွေ သဘောကျတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ tutorial လေးတွေ အများကြီးရှိလို့ စိတ်ဝင်စားရင် သွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ :)
မြတ်ကြည် အခုတလော အဖိုးရယ်၊ အဖွားရယ် ဒီကို ဆေးစစ် ရောက်လာကြလို့ လိုအပ်တာတွေဝိုင်းလုပ်ပေး.. ဆေးစစ်ပြီးတော့ Pho Cheon ကို သွားလည်တာ ခုနမှ အခန်းပြန်ရောက်ပါတယ်။ လိုက်ချင်နေတာ.. ခေါ်တာနဲ့ မဆိုင်းမတွ :P
မနက်ဖြန်လည်း ခရီးထွက်ရပါဦးမယ်။ ဌာနနဲ့ ဂျဲဂျူးကျွန်းကို conference သွားတက်ပါမယ်။ အလဲ့.. မြတ်ကြည်ရေးတာ မပါပါဘူး။ မြတ်ကြည်က နောက် semester လောက်မှ။ အထုပ်အပိုးမပြင်ရသေးဘူး။ ဘလော့ရေးနေတာ။ ဟီးဟီး :D
ဘလော့တွေ မလည်ဖြစ်ပဲ ပျောက်နေရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။ တင်စရာပို့စ်လေးတွေ ရှာခဲ့ပါဦးမယ်။
အားလုံးကို အစဉ်သတိရလျက် -
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:13 AM ဆံပင်
အရှေ့ပိုင်းက ဆံပင်လေးတွေကိုပဲ လိမ်ပြီး ကျစ်ထားတဲ့ ပုံစံ Front twist လုပ်နည်း ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြင်ဆန်းလေးလည်းဖြစ် လိုက်လုပ်ရလွယ်ကူပြီး အချိန် (၂) မိနစ်လောက်ပဲ ပေးစရာလိုတာမို့ အကြိုက်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုကြည့်ရအဆင်မပြေမှာစိုးလို့ Video ကို ချုံ့ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်လို့အဆင်ပြေမပြေ၊ ပြန်ပြောပေးပါနော်။
Facebook link က တော့ ဒီမှာ ရှိပါတယ်
Video ကြည့်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူများ အတွက်လည်း လုပ်နည်းလေးကိုရေးပေးထားပါတယ်။
၁) ခွဲကြောင်းဘေးက ဆံပင်ကို ဘီးချွန်နဲ့ ပိုင်းပြီး ယူပါ။
၂) ပိုင်းယူထားတဲ့ ဆံပင်ကို အရှေ့ခြမ်း (က)နဲ့ အနောက်ခြမ်း (ခ) ခွဲပါ
၃) အရှေ့က ဆံပင် (က) ကို အနောက်ဆံပင်စ (ခ) အပေါ်မှကျော်၍ နောက်သို့ပို့ပါ။ အနောက်ကဆံပင် (ခ) က အရှေ့သို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
၄) အရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ ဆံပင် (ခ) နဲ့ အရှေ့မှာရှိတဲ့ ဆံပင်အနည်းငယ်(ဂ) ကို ပေါင်းပါ။
၅) (ခ+ဂ) ကို အနောက်ဆံပင်(က) အပေါ်မှကျော်၍ အနောက်သို့ပို့ပါ။ အနောက်ကဆံပင် (က) က အရှေ့သို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
၆) အရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ (က) ကို အရှေ့မှာရှိတဲ့ ဆံပင် အနည်းငယ် (ဃ)နဲ့ပေါင်းပါ။
၇) (က+ဃ) ကို အနောက်က ဆံပင် (ခ+ဂ) အပေါ်သို့ကျော်၍ အနောက်သို့ပို့ပါ။ (ခ+ဂ) အရှေ့ကို့ ရောက်လာပါမယ်။
၈) (ခ+ဂ) ကို အရှေ့ဆံပင် အနည်းငယ် (င)နဲ့ပေါင်းပါ ...
ဒီလောက်ဆို သဘောတရား နားလည်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ရေးတာတောင် ပိုခက်နေမလားမသိ။
ဖော်မြုလာက - (နှစ်ပိုင်းခွဲ --> အရှေ့ကို အနောက်ကို ပို့ --> အရှေ့+ အရှေ့ --> အနောက်ကို ပို့ --> အရှေ့+ အရှေ့ -->အနောက်ကို ပို့)
လိုချင်တဲ့ အနေအထားထိလုပ်သွားပြီး ရင် သားရေကွင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကလစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိန်းလိုက်ရင် Front Twist ဆံပင်ပုံလေးရပါပြီရှင်။
Quality ကောင်းတဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေးဆိုတာ (+Check check nail tutorial)
By **~ မြတ်ကြည်~** 1:01 AM လက်​သည်း ( nail art )
စာဖတ်သူအားလုံးပဲ မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်သစ်ကူးပါရှင်။
ဒီကာလ အတွင်းမှာ လက်သည်းခြေသည်းကို အရင်ကထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်တစား အလှဆင်လာကြတာမို့၊ သိထားသင့်မယ်ထင်တဲ့ Quality ကောင်းတဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေး ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ကလဲဆိုတော့ ဟိုးအရင် Revlon promotion ပွဲတုန်းက မှတ်ထားမိတာလေးတွေပါ။
လက်သည်းဆိုးဆေးကောင်း တစ်ပုလင်းရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ တွေက -
1) ဆိုးလိုက်ရင် အရောင်ညီညီညာညာပျံ့ပါတယ်။
2) လက်သည်းနဲ့ တသားတည်းဖြစ်သွားစေပြီး လက်သည်းကိုထူထူကြီးမဖြစ်စေပါ။
3) အချိန်ခဏလေးနဲ့ ခြောက်ပါတယ်။
4) ဆိုးထားရင် ကြာကြာခံပါတယ်။
5) ရေတော်ရုံစိုလို့ မပျက်ပါဘူး
6) Nail polish remover နဲ့ အလွယ်တကူ ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
7) လက်သည်း ပြန်ဖျက်လိုက်ရင် ဝါပြီးကျန်ခဲ့တာ ကျွတ်ဆပ်တာမျိုး မရှိတာရယ်ပါ
အခုတလော the face shop က ဝယ်လာတဲ့ Face it : Check Check Nail Kit လေးကို သဘောခွေ့နေပါတယ်။ ဆနွင်းမကင်း ကွက်လေးတွေဖော်ဖို့ အတွက် လက်သည်းနီ အရောင် ဖျော့ဖျော့ ပုလင်းသုံးရောင်တွဲထား ပေးပါတယ်။
စမ်းဆိုးကြည့်တာ လှတယ်။ :)
ဘူးအနောက်မှာ ဆိုးနည်း ပြထားပါတယ်။
Nail kit မှာပါတဲ့ အပြာနု၊ ပန်းရောင် အဝါ အရောင်အပါးလေးတွေကို ထပ်လိုက်ရင် လိမ္မော်၊ အစိမ်း၊ ခရမ်းရောင် ရောင်စုံလေးတွေ ထွက်လာတာမို့ ဆိုးရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
လက်သည်းဆိုးတာ နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ အစ်မ Baby တို့လို သူတွေ အတွက် ဈေးနှုန်းလည်း ချို၊ Quality လည်း ကောင်းတာမို့ ဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရအောင် လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော် :)
နှစ်သစ်ကို စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:16 AM ဖက်ရှင်
မြတ်ကြည်ရဲ့ လက်စွဲပါပဲ။ စစရောက်သွားတာက အဖေ့အသိ သမီး မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာ ဆွဲကြိုး ဗန်းကိုင် လုပ်တော့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးက ချိတ်က အစ၊ ဒီဇိုင်နာ၊ ဖိနပ် အဆုံး သူတို့ပဲ ဝယ်ပေး၊ စီစဉ်ပေးပါတယ်။ မယုံးယုံး ချုပ်တာ အရမ်း fitting ကျပါတယ်။ အဆင်လည်း ပြေတယ်။ လာယူရမယ့်နေ့ဆို အချိန်မရွှေ့ဘူး။ ကွက်တိပဲ။ မြတ်ကြည် ဘွဲ့ rehearsal ရယ်၊ တခြား ပွဲသွားမယ့် ဝတ်စုံတွေကို သူနဲ့ ပဲ ချုပ်ပါတယ်။ လူတွေ ပြောပြောနေတဲ့ ခြင်ထောင်ဇာ ချုပ်တာ တော်တော်နိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင် ဗန်းကိုင် ဝတ်စုံ
ဒီကို သယ်လာတာ :)
ဘွဲ့ယူခါနီးတော့ ရွှေပြည်တန်ပိုးထည်တိုက် က အစ်မ ကို သွားအပူကပ်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရွှေပြည်တန် billboard ကို ကြော်ငြာတာ စိုးမြတ်သူဇာနဲ့။ တော်တော်လှတယ်။ ဒီဇိုင်နာ ဘယ်သူလဲ သိရင် အပ်ပေးပါပေါ့။ အဲဒါ.. အစ်မက စိုးမြတ်သူဇာ ဒီဇိုင်းတွေ ချုပ်ပေးတဲ့ Adore ဆီ ခေါ်သွားပေးပါတယ်။ အင်းယား လမ်းသွယ်ထဲမှာပါပဲ။ Chiffon ကို အဓိကထား ချုပ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကတော့ စိုးမြတ်သူဇာ ဖက်ရှင်အတိုင်း ပြောစရာမလိုအောင် လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပ်ထည်များတာကြောင့် ရက်ချိန်းနောက်ကျပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ ဘွဲ့ရာသီဖြစ်လို့လည်း ပါမယ်ထင်တယ်။
မြတ်ကြည်ကျောင်းတက်တုန်းက သူနဲ့ပဲ အပ်ပါတယ်။ သူက ကချင်ထည်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအထည်စတွေကိုပဲ သီးသန့် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်သူပါ။ တခြား အစတွေနဲ့ဆို မချုပ်ပေးပါဘူး။ တခါတလေ အစ်မရယ် လုပ်ပါ၊ ဘာညာ ပြောရင်တော့ ချုပ်ပေးပါတယ်။ ထသွားထလာ အင်္ကျီကို သူများနဲ့ မတူအောင် လှလှပပ ထွင်တတ်ပါတယ်။ Shayi (ready- made) အင်္ကျီ ဆိုင် ဆိုင်ခွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။
ကျောင်းအပြန် The Ritz မှာ
မြတ်ကြည် rehearsal နေ့က ဝတ်တဲ့ ချိတ်ကို သူ ကျောက်စီပေးထားတာပါ။ မန္တလေးရောက်တော့ အစ်ကို တစ်ယောက်က အာမဘန္တေ ခံပြီး လိုက်ပို့တာ။ အပ်တာတော့ ဝတ်စုံပြည့်ပါပဲ။ အပေါ်အင်္ကျီက အလက်လက်တွေနဲ့ အရမ်းတောက်လွန်းပြီး ထွက်လာတဲ့ ပုံက ရင်ဖုံး၊ လက်ရှည် ဆိုတော့ အရမ်း ရိုးလို့ အပေါ်ကို မယုံးယုံးနဲ့ နီးမှ ကမန်းကတန်း ချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
မမဉ္ဇူရဲ့ ညီမပါ။ မြတ်ကြည် အဒေါ်ရဲ့ ပင်တိုင်။ အပါးစ နိုင်ပြီး draping ချုပ်တာတော်ပါတယ်။ မြတ်ကြည်တော့ သိပ်မအပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ၁ ထည်စ ၂ ထည်စ လောက်ပါပဲ။ ကိုယ့်
အကြိုက်နဲ့ မကိုက်လို့ ဖြစ်မယ်။ ဒီဇိုင်နာဆိုတော့လည်း ဟိုဟာချုပ်ပါ ဒီဟာချုပ်ပါ ဆရာလုပ်လို့ မရ၊ ပြောပြီး လည်း ကြိုက်တာ ချုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုက်တဲ့ သူပဲရွေးအပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ပြောသွားတာတွေကတော့ မြတ်ကြည်အမြင်ပေါ့နော်။ ကွဲလွဲရင်လည်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ပွဲရှိမှ အပ်ဖြစ်တာများ ပါတယ်။ ပွဲရှိရင်လည်း ဘောစိမဟုတ်တော့ တခါတလေ သိမ်းထားတာ ထုတ်ဝတ်လိုက်တာပါပဲ။ :D
စာဖတ်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက် အရ cbox မှာရေးထားတဲ့ လိပ်စာလေးတွေ ပြန်ကူးပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Shayi ကတော့ 24/3 နဝဒေး လမ်း (ဒဂုံ ၁ ဘေးက လမ်း) ထဲမှာပါ။
12 Apr 12, 11:14 PM
myatkyi: adore - အမှတ် ၉၆ C/D အင်ယားလမ်း
12 Apr 12, 11:00 PM
myatkyi: မယုံးယုံးက moon bakery ဘေးကလမ်းကို ဝင်သွားလိုက်ရင် လှိုင်မြင့်မို အိမ်ယာ၊ မာတလိလမ်း တိုက်ခန်း 3/ 4ပါ။ ဖုန်းက ၀၉ ၅၁၁ ၉၅၇၃၃. ၀၁ ၅၀၃၁၈၉။ အိမ်ကို ပြန်မေးလိုက်တာ
Sites to make slideshow online နဲ့ တစ်သိန်းပြည့် လက်ဆောင်
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:17 PM Website လမ်းညွှန်
Photo slideshow လှလှ လေးတွေ လုပ်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ။
Template ဒီဇိုင်းနဲ့ တင်ပြပုံလေးတွေ တော်တော်လှပါတယ်။ Account မဖွင့်ချင်သူတွေ facebook နဲ့ sign-in လို့ရပါတယ်။ ထည့်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို social network တွေနဲ့ ချိတ်လို့ရသလို၊ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ သီချင်းကိုလည်း computer မှ တစ်ဆင့် upload လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
Link ချိတ်နိုင်ရုံမက၊ ဘလော့တွေမှာ embed လုပ်နိုင်၊ download ဆွဲ နိုင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ အချက်က premium မဟုတ်တဲ့ အတွက် ၃၅ စက္ကန့်တာပဲ ပေးပါတယ်.
ဒါလေးက မြတ်ကြည် မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် သွားတုန်းက ပုံတွေကို slideshow လုပ်ထားတာပါ။။ အဲဒီတုန်းက ဆံပင်အရှည် အလိပ်ကြီးကောက်ထားတာ ပြန်လိုချင်နေတယ်။ :D
Slideshow ပုံစံလေး သဘောကျတယ်ဆို လိပ်စာက www.animoto.com :)
Slideshow လုပ်လို့ရတဲ့ တခြား sites တွေကတော့-
ဟိုနေ့က တစ်သိန်းပြည့် လက်ဆောင် ဘာများ ဖြစ်မလဲ လို့သိချင်ကြမှာပေါ့နော်။ Estee Lauder က Signature shadow Quad Truffle လေးပါ။
လက်ဆောင်ကို Florida မှ မ Jewel သို့ ပို့ပေးလိုက်ပါပြီရှင်။
လာပြီး ရေးပေးကြလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ :)
စာဖတ်သူများအတွက် သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်ရက် ဖြစ်ပါစေရှင်။